Logos tany am-boalohany sy famoronana | Creatives Online
Mety haharitra dimy minitra ny fandrafetana logo iray. Fa rehefa mifankatia logos tany am-boalohany sy famoronana, dia mety ho dimampolo ora, na dimanjato ny fotoana. Na dimy arivo. Tsy hain'ny aingam-panahy mihitsy hoe rahoviana no ho tonga izany ary tsy maintsy mandinika lafin-javatra maro izay hisy fiantraikany ianao, na ny orinasa na ny sary tianao hasongadina miaraka amin'io logo io.
Noho izany, misy logos sasany izay ohatra mba hanentanana antsika sy hanampy antsika hahatakatra ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny logo mahazatra sy ny famoronana. Te hahafantatra ny sasany amin'ireo ohatra ireo ve ianao? Hiresaka momba izany eto ambany isika.
1 Inona no atao hoe logo famoronana
2 Ahoana ny fomba hamoronana logos tany am-boalohany sy famoronana
3 Ohatra amin'ny logos tany am-boalohany sy famoronana
Inona no atao hoe logo famoronana
Alohan'ny hanomezanao ohatra momba ny logos tany am-boalohany sy famoronana, dia zava-dehibe ny hahafantaranao tsara hoe inona ny logo famoronana.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy milaza aminao aloha izahay inona no atao hoe logo. Ity dia momba ny fanehoana orinasa iray, ny sary hatolony ho an'ny olona fa miditra amin'ny orinasa izy ireo, na ara-batana na an-tserasera.
Izy io dia ahitana sary, marika ary / na litera (izany hoe, afaka mitondra izany rehetra izany na ampahany amin'izy ireo ihany).
Ankehitriny, manao ahoana ny endrik'ilay logo famoronana? Azo lazaina ho famoronana miavaka ny logos famoronana, izay noforonina amin'ny fiheverana ny marika, izay tiany haseho, ny mpihaino kendrena ary ny fironana tsy miandany sy tsy manam-potoana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, miresaka momba ny marika iray izay mamaritra ny marika manokana isika, na dia tsy misy teny aza, raha vao mahita izany sary, litera na marika izany.
Izany no antony mahasarotra ny mamorona logos tany am-boalohany sy famoronana, satria mila mahafantatra tsara ny orinasa ianao, ny soatoavina, ny iraka, ny tanjona, sns. ary, miaraka amin'izay koa, ho an'ireo mpanjifa kendrena ananan'ny orinasa. Tsy azo atao ve izany? Tsia, ary manana santionany tsara eto ambany izahay izay azonay aseho anao.
Ahoana ny fomba hamoronana logos tany am-boalohany sy famoronana
Tsy misy isalasalana fa ny fananana logos tany am-boalohany sy famoronana dia avo arivo heny noho ny iray izay alainao ao anatin'ny dimy minitra ary izany dia mba hialana amin'ny olana fotsiny, fa mangatsiaka sy tsy misolo tena ny marika. Saingy tsy mora tahaka ireo tsotra ireo ny famoronana azy ireo (izay azonao jerena eny an-tsena ihany koa).
Ny 'logo lehibe' dia tokony hisongadina amin'ny maha tsotra, fa tsy amin'ny hoe mametraka zavatra dia izay ihany, fa tsy mila mahavoky fa mamorona éffet visual mahasarika nefa tsy miteraka fandavana. Tokony ho tsaroana ihany koa izany, ilay karazana izay rehefa hitanao voalohany dia tsy afaka miala amin'ny lohanao intsony satria nisy fiantraikany taminao. Ampio ilay tsy lany andro, satria tsy miova ela ny logos. Marina fa, mba hifanaraka amin'ny fironana vaovao, dia azo atao ny manovaova, fa ny maha-izy azy no mitoetra.
Farany, tsy maintsy voafaritra manokana amin'ny orinasa na marika izy io ary azo ampiasaina ihany koa, izany hoe azonao atao ny mampifanaraka azy amin'ny endrika rehetra nefa tsy manary kalitao.
Raha manaraka izany rehetra izany ianao dia efa manana omby betsaka.
Mazava ho azy, misy lafin-javatra tokony hotadidinao foana, toy ny sary, typography ary marika. Ary ny habeny. Izany rehetra izany dia manana anjara toerana lehibe amin'ny vokatra farany amin'ny logo, ary izany no mety hahatonga anao hahomby na tsy hahomby.
Mazava ho azy fa tsy maintsy manao fitsapana maro foana ianao ary mitafy ny tenanao amin'ny faharetana mandra-pahatongan'ny aingam-panahy hilaza aminao fa "izany" no logo notadiavinao ary hahatonga ny mpanjifanao ho raiki-pitia tahaka ny nitiavanao an'io famoronana io.
Ohatra amin'ny logos tany am-boalohany sy famoronana
Araka ny fantatray fa tianao ho fantatra hoe inona ny logos tany am-boalohany sy famoronana azonay aseho anao, dia tsy hampiandry anao intsony izahay. Santionany amin'ireo misy ireo.
Azo antoka fa fantatrao hoe inona ny logo Amazon. Tena marina izany miforona amin'ny teny amazon, amin'ny litera kely ary marika. Ity farany izay manome hery ny teny. Ary raha mijery azy ianao dia maneho tsiky ilay tsipìka mavo misy marika hafa amin'ny tendrony iray.
Ary inona no mitsikitsiky azy? Amin'ny teny hoe 'amazon'. Noho izany, manome ny sary fa ny orinasa dia hampitsiky anao.
Azontsika antoka fa, anisan'ireo logos tany am-boalohany sy famoronana, ny an'i Barbie dia tsy maintsy ianarana amin'ny asa maro. Ary tamin'ny fotoana namoronana azy, tamin'ny 1959, ny mpamorona azy dia nahay nampita ny maha-vehivavy an'io marika io ao amin'ny logo. Iray amin'ireo tsotra indrindra izy io ary iray amin'ireo tsara indrindra eran-tany.
Raha tsikaritrareo, ny logo dia ny anaran'ny saribakoly. SAINGY Izy io dia natao tamin'ny endritsoratra manokana sy loko mavokely, solontenan'ny ankizivavy (na dia fantatrao fa nandritra ny fotoana ela ny mavokely no lokon'ny ankizilahy).
Marina fa efa nandalo fiovana nandritra ny taona maro izy io, saingy mbola mitazona ny maha izy azy. Raha ny marina, ny logo ankehitriny dia saika mitovy amin'ny niaviany.
Imbetsaka isika no tsy nahay nanoratra azy, sa tsy izany? Indraindray izahay mametraka Coca-Cola, Coca-Cola hafa. SAINGY manana ny 'ces' roa amin'ny litera lehibe izy io. Ankehitriny, logo izay manasa fifaliana, fialamboly, positivity, fifandraisana na firaisana ...
Izy io dia mifanaraka amin'ny zavatra rehetra voalazantsika teo aloha, ary hatramin'ny namoronana azy dia nandalo fiovana maro, ka hatramin'ny mainty dia manana loko telo mena.
Marina fa ny logo voalohany tamin'ny 1886 sy ny iray ankehitriny dia tsy misy ifandraisany amin'izany, fa ny teny ihany, fa raha jerena akaiky, ny typography ihany no niova, satria nitahiry ny maha-izy azy izy ireo (indrindra ny tamin'ny 1887).
Nahoana no asongadinay ity logo ity? Satria amin'ny ankapobeny dia fanehoana tsara tarehy mifandraika amin'ny orinasa sy ny marika asehony izany. Manana singa miafina maro koa anefa izy io. Hevitry ny mpamorona azy manokana.
El Toblerone logo dia miavaka amin'ny tendrombohitra sy ny marika, Toblerone miaraka amin'ny endri-tsoratra voafaritra sy sisin-tsoratra amin'ny litera. Saingy ny marina dia misy zavatra betsaka kokoa.
Amin'ny lafiny iray, ny tendrombohitra izay voatsoaka dia manondro an'i Soisa, indrindra fa ny Matterhorn, izay any amin’ny Alpes ary tampon’isa fahadimy avo indrindra ao amin’ilay faritra.
Eo amin'io tendrombohitra io ihany no ahitanao fa manao sary hafahafa izy, ary raha mifantoka ianao dia ho hitanao fa bera izy io. Ity dia fanomezam-boninahitra an'i Bern (na Bern), ilay toerana namoronan'i Theodor Tobler sy Emil Baumann, zanak'olo-mpiray tam-po aminy, ity bara sôkôla ity. Ny orsa no biby solontenany, ary hita eo amin'ny ampinga ofisialy izy io ka te hanome voninahitra azy. Fanampin'izany, raha dinihina akaiky, ny anaran'i Toblerone dia manana ny tanànan'i Bern ao anatin'ireo litera ho an'iBlERoNe.
Mazava ho azy fa misy ohatra maro hafa tokony hodinihina, ary izany dia ny fahaiza-mamorona sy ny fitaomam-panahy dia mety hahatonga anao hahazo zavatra miavaka ho an'ny orinasa. Mila mitafy faharetana sy mandinika fotsiny ianao satria na ny pitsopitsony kely indrindra aza dia afaka mandrehitra ny 'takao' anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Logos tany am-boalohany sy famoronana